Vaovao - Ahoana no hanavahana ny "vera" - ny fahasamihafana misy eo amin'ny tombony azo amin'ny vera laminated sy vera insulate
Ahoana no hanavahana ny "vera" - ny tsy fitovizan'ny tombony azo amin'ny vera misy laminated sy ny vera insulate
Inona ny vera mitaingina?
Ny vera fitifirana dia noforonin'ny Amerikanina tamin'ny 1865. Izy io dia karazana fitaovam-pananganana vaovao misy insulation hafanana tsara, ins insulateur, estetika ary azo ampiharina, izay afaka mampihena ny lanjan'ny trano. Mampiasà vera roa (na telo) eo anelanelan'ny vera izy io. Fitaovana desiccant mandoko hamandoana hahazoana antoka ny fisian'ny rivotra maina maharitra ao anatin'ny vera banga, tsy misy hamandoana sy vovoka. Mampiasà lakaoly mitambatra avo lenta sy mafy rivotra hametahana ny takelaka fitaratra sy ny firafitry ny aliminioma hahatonga ny fitaratra azo antoka tsara.
Inona ny vera voadio?
Ny vera voahosotra dia antsoina koa hoe vera voamarina. Telo na maromaro ny vera mitsingevana dia voahosotra amin'ny sarimihetsika PVB (ethylene polymer butyrate) sarimihetsika, izay hafanaina ary potserina handevona ny rivotra araka izay tratra, ary avy eo dia apetraka ao anaty autoclave ary ampiasao ny hafanana ambony sy ny tsindry avo be hanalana a rivotra kely sisa tavela. Ao amin'ny sarimihetsika. Raha ampitahaina amin'ny vera hafa dia manana fananana fanoherana ny hovitrovitra, fanoherana fangalarana, porofo-bala ary porofo mipoaka.
Noho izany, iza no tokony hofidiko eo amin'ny vera misy laminated sy vera insulate?
Voalohany indrindra, ny vera misy laminated sy ny vera insulate dia misy ny vokatry ny insulateur amin'ny feo sy ny insulation heat amin'ny lafiny iray. Na izany aza, ny vera laminated dia manana fanoherana mahery vaika sy fanamafisana ny fipoahana, raha ny vera mitaingina kosa dia manana toetran'ny insulateur thermaly tsara kokoa.
Eo amin'ny lafiny insulated feo, misy fahasamihafana samy hafa eo amin'izy roa. Ny fitaratra voalamina dia manana seismika tsara, ka rehefa matanjaka ny rivotra, dia kely dia kely ny mety hisian'ny fikotrokotroky ny tena, indrindra amin'ny haavo ambany. Ny vera poakaty dia mora resonance.
Na izany aza, ny vera fitifirana dia misy tombony kely amin'ny fitokanana ny tabataba ivelany. Noho izany, arakaraka ny toerana samy hafa dia tsy mitovy ihany koa ny vera voafantina.
Ny vera fitaratra no mbola be mpanaraka!
Ny vera mitaingina no zanadrafitra fitaratra mahazatra an'ny varavarana sy ny varavarankely Suifu. Ny vera mitaingina dia misy vera roa (na telo). Ny sombin-kazo fitaratra dia mifamatotra amin'ny alim-bolan'ny aliminioma misy desiccant amin'ny alàlan'ny lakaoly fitambaran-tanjaka avo lenta sy avo lenta mba hamokarana insulated feo sy insulate heat. Ahitra insulate.
1. Insulated thermal
Ny fitarihana hafanana an'ny soson'ny rivotra famehezana ny vera insulate dia ambany lavitra noho ilay mahazatra. Noho izany, raha ampitahaina amin'ny vera tokana, ny fanaovana insulate ny vera fitifirana dia azo avo roa heny: amin'ny fahavaratra, ny vera mitaingina dia afaka manakana ny 70% -n'ny angovo tara-masoandro, manalavitra ny trano. Ny fihenan'ny hafanana dia afaka mampihena ny fanjifana angovo azo ampiasaina amin'ny rivotra; amin'ny ririnina, ny vera mitaingina dia afaka manakana ny fahaverezan'ny fanafanana anaty trano ary mampihena ny tahan'ny fahaverezan'ny hafanana hatramin'ny 40%.
Ny vokatra fitaratra dia tezitra amin'ny hafanana tsy tapaka 695 degre mba hahazoana antoka fa hafanaina mitovy ny tampon'ny vera; ny fahasamihafana eo amin'ny maripana izay mahazaka dia in-3 heny noho ny vera tsotra, ary ny tanjaky ny maripana dia 5 heny noho ny vera tsotra. Rehefa simba ilay vera lava be dia be, dia hivadika ho tsiranoka miendrika tsaramaso (zana-zoro), izay tsy mora ny mandratra olona, ​​ary azo antoka kokoa ny traikefa azo antoka amin'ny varavarana sy ny varavarankely.
3. Fanamafisam-peo sy fihenan'ny tabataba
Ny sosona poakaty ao am-baravarana sy ny fitaratry ny varavarankely dia nofenoina etona-entona tsy misy atiny. Rehefa nofenoina argon dia afaka mahatratra 60% ny fihenan'ny feo sy ny fihenan'ny tabataban'ny varavarana sy ny varavarankely. Mandritra izany fotoana izany, noho ny fitondra hafanana ambany an'ny gazy maina tsy mitongilana, ny fampisehoana insulated ny sosona feno entona poakaty dia avo lavitra noho ny an'ny varavarana sy ny varavarankely mahazatra.
Ho an'ny fampiasana an-trano mahazatra, ny vera mitaingina no safidy be mpampiasa indrindra. Raha mipetraka amin'ny faritra avo be ianao, ary mahery ny rivotra ary mihena ny tabataba any ivelany, safidy tsara koa ny vera misy laminated.
Ny fisehoana mivantana indrindra amin'ireo karazan-kazo roa ireo dia ny fampiasana ny efitranon'andro. Ny tampon'ny efitry ny masoandro amin'ny ankapobeny dia mitazona vera misy sosona roa sosona. Ny vera facade an'ny efitrano masoandro dia mampiasa vera insulate.
Satria raha sendra zavatra latsaka avy amin'ny haavon'ny toerana ianao, dia avo dia avo ny fiarovana ny vera laminated, ary tsy mora ny vaky tanteraka. Ny fampiasana vera fitifirana ho an'ny vera facade dia mety hahatratra tsara kokoa ny effet insulate heat, izay mahatonga ny efitry ny masoandro mafana amin'ny ririnina ary hangatsiaka amin'ny fahavaratra. Noho izany, tsy azo lazaina hoe vera misy laminated misy sosona roa na vera fisisika misy sosona roa no tsara kokoa, fa afaka milaza afa-tsy ny lafiny iza no manana fangatahana lehibe kokoa.
Fotoana fandefasana: Jul-29-2021